भारतीयले अपमान गर्दा मनिषालाइ मिल्यो सिङ्गो नेपाल र नेपालीजन साथ – Khabar Silo
उनले त्यसमा समर्थन जनाउँदै अब कुटनितीक माध्यमवाट समस्या समाधान गर्न अपिल गरेकी थिइन् । सोही विषयले भारतीय मिडियामा खैलाबैला भएको हो । भारतीय मिडियाहरुले खेदो खनिरहेका बेला नेपालीहरुले उनको साथ र समर्थन रहने जनाएका छ्न् । सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरुले उनको समर्थनमा स्टटासहरु लेखेका छन् ।उनले गरेको ट्वीटलाई लिएर नेपालीहरुले मनिषाको उच्च प्रसंशा गगरिएको छ । नेपालमा मनिषाको समर्थन भइरहँदा भारतीय ट्वीटर प्रयोगकर्तादेखि सञ्चारमाध्यमले उनीविरुद्ध विरोध जनाइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगै कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आवश्यक कदम उठाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेकी थिइन्।उनले लेखेकी छिन्, ‘हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद । अब हामी तीन महान देशहरुबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौं ।’
भारतीय टिभी च्यानल एबीपी न्यूजले त उनको ट्वीटलाई नै लिएर बनाएको समाचारमा निकै आपत्तीजनक कुरा भनिएको छ । उनलाई – भारतको नुन खाएर चीनको गीत गाउने ? जस्ता आरोप लगाइएको छ । अभिनेत्री कोइरालाले भने यि सब कुराको कुनै प्रतिकृया दिएकी छैनन् भारतीय मिडियाहरुले विरोध जनाए पनि नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले भने मनिषाको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मनिषा कोरइरालाको साथमा भन्दै लेखेका छन् –
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको निर्णयका निम्ति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिदैं ट्वीट् गर्नुभएकी विख्यात नायिका मनिषा कोइरालाको भर्त्सना गर्ने भारतीय संचार जगतको रवैया खेदजनक छ ।वलिउडकी स्थापित अभिनेत्रीले आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित हुँदा खुशी र हर्षका साथ वास्तवमा आफ्नो सरकारलाई धन्यवाद दिनु शतप्रतिशत सही काम हो ।
आफ्नो मातृभूमिको हक, हित र अधिकार अनि स्वाभिमानको पक्षमा उभिएर मनिषाजीले गरेको यो उल्लेखनीय सद्कर्म, राष्ट्रसेवा र देशभक्तिको अभिव्यक्ति हो । भारतीय सिने क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो सिंगो योग्यता र उर्वर जीवन लगानी गरेर हासिल गरेको लोकप्रियता र ख्याती सामान्य छैन ।अहिलेको उहाँको बोली त्यही उचाइ सुहाउँदो, शिष्ट र सचेत छ । सिङ्गो नेपाल र नेपालीजन मनिषाको साथमा छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकी नातिनी रहनुको नाताले पनि मनिषाले आफ्नो सचेत, जागृत र राष्ट्रप्रतिको माया ममतालाई अटुट र अक्षुण राख्नै पर्दथ्यो, क्या बात ! धन्यवाद ।भारतले गत नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस समयदेखि विवाद सिर्जना भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच भारतले लिपुलेकमा आफ्नो सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै चर्किएको हो ।
चितवनमा भएको एउटा घट,नाले अहिले सबैको ध्या,न तानेको छ । सानै उमेरमा प्रेममा परेका जोडीको वियोगान्त अवस्थाले युवक जिवनको दोसाँधमा छन् भने एउटै गाउँका दुई परिवारबीच दु,स्मनीको अवस्था आएको छ । १७ वर्षकी युवती र २१ वर्षका युवक एक अर्कालाई प्रेम गर्थे । उनीहरुले विवाह पनि गरे । तर परिवारले उनीहरुको विवाह स्वीकार गर्न नसकेका […]
एजेन्सी– रोजगारीका लागि लाखौं नेपालीहरु रहेको दक्षिण कोरियामा लगातार तेस्रो दिन पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । न्यूज एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार त्यहाँ तेस्रो दिन २० भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण देखिएको हो । संक्रमितमा ८ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । यहाँ कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म २६६ जनाको मृत्यू भइसकेको छ । यहाँको मृत्यूदर २.३८ रहेको छ […]
काठमाडौं- सडक दु’र्घ टनामा परी अमेरिकामा एक नेपालीको दुखद नि’धन भएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ६, स्थायी घर भएको २४ वर्षका सुविन बास्तोलाको कार दु८र्घ टनामा परी निध’न भएको हो ।******यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****** उनी बिगत ५ वर्ष देखी अमेरिकामा बस्दै आएका थिए । कलेजको पढाइ सकेर […]
रौतहटमा तीन घरमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति